PIPA / SOPA: Zvemahara Zvemukati Zvinogona Kutiuraya isu | Martech Zone
Chitatu, Ndira 18, 2012 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Makambani mazhinji arikusvibisa masaiti avo mukuedza kurwisa Protect IP (PIPA) / SOPA Act iri kuongororwa pano muUnited States. Panzvimbo pekukwira mungoro ndokuvhara saiti yangu, ndakafunga kuti zvingave zvakavaka kugovana zvandaita newe.
Isu tine anopfuura 2,500 mablog mablog ayo kukurudzira tekinoroji inobatsira vamiririri nevashambadzi pasirese. Hatisati tambobhadharisa chero zvemukati medu, uye isu hatidi. Kana isu takadzika, isu tinowanzo tora nguva yekuongorora chigadzirwa kana nyaya - uye isu tinotumira ruzivo irwo pasina muripo. Isu takave nemanotsi asinganzwisisike kubva kumakambani akataura kuti tisu chete blog rakacherekedza uye zvakatungamira mukuburitswa kwakakura uye kukura kwezvishandiso zvavo.
Isu tiri pane zita rekutanga nevazhinji muhunyanzvi uye neruzhinji hukama maindasitiri nekuti isu tinoshuvira kubatsira. Nepo mamwe mabloggi achida kubvarura kambani kana tekinoroji, iwe uchaona kuti edu ezvinyorwa anotsigira zvakanyanya. Tinoda kuti ubudirire. Tinoda kuti ubudirire nemhinduro. Tinoda kutsvaga mhinduro idzodzo.
Mamwe makambani ari kutitsigira kuburikidza nerutsigiro. Zoomerang (ikozvino SurveyMonkey) ndiye akatanga kutsigira zviri pamutemo, a yemahara online poll software izvo zvakawedzera zvakanyanya kunyora kwedu uye kudyidzana nevadzidzi vedu. Delivra chiri email kambani yekutengesa uyo anopa zvemukati uye nekutsvaga kwevatengesi veemail. Right Pane Inopindirana inotungamira otomatiki kushambadzira mhinduro ndiani arikutibatsira kunzwisisa mutengi wehupenyu hwekutengesa.
Nevatsigiri vedu uye vashambadziri, isu takakwanisa kuitisa kushambadzira podcast, tiri kugadzira tsamba huru yeemail, isu tatanga kugadzira mavhidhiyo uye isu tinoramba tichiwedzera ruzivo rwesaiti yedu. Isu tine kunyange nharembozha application kukona chaiko! Webinars ari pane yedu pfupi runyorwa zvakare. Zvese izvo zvakasununguka kwauri - vedu vaverengi. Kunyangwe isu tisingabhadhare kubva kubhurogu zvakananga, mari yacho inodyarwa kubatsira iwe. Ehe, isu tinobatsirwa nekuva neyekutanga blog ... asi tinovimba iwe unodaro, futi.
Izvi zvinogona kuchinja.
Nhasi, tanga tine musangano nevamiriri vedu vemunharaunda muIndiana kuti tikurukure zvinonetsa zvedu ne Dzivirira IP chiito uye SOPA. Kunyange vatungamiriri vacho vaipindura, havana kutaura kana mumiriri wedu aitsigira bhiri kana kwete. Heano rumwe ruzivo - asi ndokumbirawo uverenge zvinyorwa zvangu pazasi nezvinondinetsa.
Sekureva kune vamiririri vedu, iyo DNS yekuvharira yakawedzeredzwa uye inoda wechitatu bato kuti aone kuti kana kwete chaiko kuvharira saiti. Verbiage inosendamira munzira iyo nzvimbo chete dzinogona kuvharika masayiti ekunze. Ini handisi gweta, saka handina chokwadi kuti ichokwadi here kana kuti kwete.
Izvo zvinogona kuitika ipapo ipapo, pasina nzira yakafanira, ndeyekuti saiti inoonekwa seinotsigira kutyorwa kwekopiraiti inogona kubviswa kubva kumajini ekutsvaga pamwe nenzira dzese dzekushambadzira mari dzakadzivirirwa. Izvi zvinogona kuitika pasina ziviso uye pasina kugona kwenzvimbo yekuzvidzivirira. Yedu yekutsvaga injini yekushanyira uye yedu yemari ndiyo hupenyu hweropa iyo inobvumira iyi blog kuti irambe ichiwedzera. Mune mamwe mazwi, kana mubatanidzwa unorema pamutemo savvy uyo anoda kuenda kuhondo nezviri mukati medu ... bhurogu redu rinogona kudzipwa kusvika parufu pasina chekuita.
Ini ndakavimbiswa pafoni kuti izvi zvaive zvisingaite, kuti isu taizokwanisa kuwana mumiriri uye kurwisa nyaya. Pano pane dambudziko… zvinotora nguva nemari zvandisina sebhizinesi diki. Saka, pane kurwa, zvingave zvakanaka kwandiri kupeta saiti iyi ndodzoka ndoshandira kambani hombe. Izvo zvinotyisa.
Washington iguta rizere nemagweta. Ivo havawanzo rangarira kuti avo vedu vasina zviwanikwa zviri pamutemo havawani kuti vazvidzivirire zvakakwana. Izvi, mumaonero angu, ndizvo zvakanyorwa kuti Dzivirira IP uye SOPA Mabasa. Ivo chishandiso cheiri kufa indasitiri… yekupedzisira yekufema kuyedza kudzivirira izvo zvisingadzivisike. Kufananidza kwandakapa aive muchengeti wechitoro akaramba kuisa makiyi pamusuwo wavo. Sezvo vasingakwanise kufunga kuti vangazvidzivirire sei, vava kukumbira hurumende kuti ivachengetedze.
Ini handisi kunyora izvi chete kubva kune imwechete maonero eblogger. Isu tinopa zvemukati pamwe nekutarisira kuti copyright yedu inoremekedzwa. Dzimwe nguva kwanga kusiri uye ini ndakatora matanho. Ini ndakakwanisa kuvhara masayiti, kumhan'ara kumasisitimu ekushambadzira, uye ndine mamwe makambani - semakambani emifananidzo yemasheya - nehomwe dzakadzama dzinovatevera. Izvi zvinoreva kuti zvishoma ol 'Doug ave achikwanisa kukanganisa kukanganisa uye kurwisa pasina kuda kwekuti hurumende ibatanidzwe. Ehezve, izvi hazvisi zvemidziyo yangu yehungwaru kunyangwe - zviri zvemufirimu uye rekodhi indasitiri iri kudzikira purofiti.
Zvinosuruvarisa. Uye zvinosuwisa kuti vatungamiriri vedu vezvematongerwo enyika vari kunyatsofunga nezvekuita izvi. Zvinotonyanya kurwadza ndezvekuti a utongi hwegutsaruzhinji mutungamiri, Chris Dodd, ndiye ave mutungamiriri wesimba iri rinozopwanya chairo chinhu cheInternet - kugona kugovana ruzivo zvakasununguka. Iri bhiri rinowedzera kupa simba kune avo vane homwe dzakadzika… uye kubvisa mukana kune vasina simba. Izvo zvinokanganisa wese mushandisi paInternet, kusanganisira iwe.
Ndokumbira utore nguva yekuverenga iyo yakanaka ruzivo uye unzwisise kuti zvinokukanganisa sei iwe, zvemukati, uye bhizinesi rako. Haufanire kunge uri muAmerica, Indaneti haina miganhu yatinokwanisa kuisa masimba… uye vari kunze kweUnited States ndivo panjodzi huru kutipfuura. Verenga zvimwe pa Mira American Censorship.
Chii chinonzi Tekinoroji Kuuraya
Kutaura kwako kuti "Panzvimbo pekurwa, zvingave zvakanaka kwandiri kuti ndipete saiti iyi ndodzoka ndoshandira kambani hombe. Zvinotyisa. ”
Ndofunga warova chipikiri mumusoro ipapo.
Pamwe ndakati kurerekerei semuridzi webhizimusi diki zvakare, asi zvese zvandinoona kubva kune vezvematongerwo enyika kubhodhi iri kutikurudzira kutora basa sechigamba mune yakakura system. Pane kurudziro diki kune vekuAmerican kuti vadzokere kumabhizimusi edu midzi uye iyo "American Dream" yashandurwa kuita imwe "yekodzero" package. Bhizimusi hombe rinowana bailout nepo bhizinesi diki kazhinji risingakwanise kuwana chikwereti mazuva ano.
Zvese izvo zvekutaura, iyo SOPA & PIPA Mabasa zvinoita kunge zvinoenderana neizvozvo. Ini ndinotarisira kuti vese vapfurwa zvizere, asi tichiziva magweta muWashington, uku hakuzove kwekupedzisira kwatinonzwa nezverudzi urwu rweMabasa.
Shingairira hama, uye ramba uchiita zvauri kuita.
Mashoko aBrian anoratidza chimwe chinhu chave chichiitika mune yedu
nyika yezvakawanda zvemakore ekupedzisira zana nemakumi mashanu, izvo zviri kuedza kukuru
masangano akaita sehurumende, kudzora hupenyu hwevashoma
kuzvidzivirira. Hurumende yedu yakagadzira zvirongwa zvemagariro izvo zvakakosha
kubvisa chero pfungwa yemunhu mutoro uye yemukati-kurudziro
kubva kuvanhu vanovakonzera kuve vanovimba zvakadaro nesystem inotya
yekusagadzikana kana kukuvara kunovatadzisa kubva (yedu 79-vhiki refu
kusashanda kweinishuwarenzi chirongwa muenzaniso wakanaka). Hurumende yedu ndiyo
zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo kutora matanho ekudzima bhizimusi ne
kutora iyo mibayiro yainogona kubata kune vanhu (kuburikidza nemitero,
mirau, magariro, uye zvimwe) uye nekuramba kubvuma kuti ndizvo
chimwe chezvinhu zvishoma zvakabvumidza America kukura kuva nyika
simba kubva pakuvamba kwayo kusvika muzana ramakumi maviri.
Ndira 18, 2012 na12: 29 PM
Nharo huru, dzakagadzirwa zvakanaka. SOPA inofanira kumiswa.
Ndira 18, 2012 na6: 17 PM
Mira "SOPA" ndizvo chaizvo. Zvinoita kuti ndinetseke kuti ndiani, chii & nei izvi zviri kuitika - Ndiani chaizvo ari kumashure kweSOPA?
Ini ndinokuudza iwe vana ... zvese zviri pamusoro pechinhu chimwe "DZIDZISO"